‘रिल्याक्स’ मुडमा देउवा - Dainik Nepal
सेभेन स्टारमा के–के खाए ? कसरी रमाए ?
दैनिक नेपाल २०७५ असार १० गते १५:२२
काठमाडौं, १० असार । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसै पनि रिल्याक्स गर्ने नेता हुन् । उनलाई कति बेला पिउन, कतिबेला पिलाउन मन लाग्छ थाहा हुँदैन । त्यसमाथि पार्टीमा फरक गुटबन्दीको फरक मोर्चाबन्दीले उनलाई तनाब थियो । शुक्रबार सोझै चितवनतिर लागे, उनी ।
सौरहा पुगेका देउवाको बसाई सेभेनस्टार होटलमा भयो । केही सहयोगीसहित पुगेका देउवालाई सुरक्षाका साथ सेभेन स्टारमा प्रहरीले राख्यो । उनी नीजि जीवनमा रमाउने कोशिशमा भुलिए ।
‘पार्टी कामको ह्याङका कारणले उहाँ आरामका लागि आउनु भएको हो । नितान्त व्यक्तिगत आराममा उहाँ अभ्यस्त हुनुभयो’, एक सहयोगीले भने,‘बेलुका राम्रोसँग डिनर गर्नुभयो, शनिबार विहान ब्रेक फास्ट गरेर चितवनको दृश्यावलोकन गर्नुभयो ।’
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको हेटौँडामा सम्पन्न भेलामा जवाफ फर्काएपछि देउवा त्यता लागेका थिए । जिल्ला सभापति भेलामा उनको कार्यशैलीको आलोचना भएको थियो ।
त्यसै पनि पिउनमा सौख राख्ने देउवाले आरामका लागि छुटाएको समयलाई राम्रै सदुपयोग गरे । उनीनिकटवर्तीहरूका अनुसार देउवाले ‘डबल ब्ल्याक’ ह्वीस्कि आइससँग लिए ।
‘उहाँ नितान्त आरामका लागि आउनु भएको हो, पार्टीका नेता कार्यकर्ता भेट्नु भएन । सौराहामा गर्मी छल्दै स्विमिङमा हेर्दै बस्नुभयो’, उनीनिकट स्रोतले भन्यो,‘उहाँ केही समय विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारणमा पनि रमाउनुभयो ।’
त्यसो त नेताहरूमा सौखिन पनि देउवा नै हुन् । उनी अलिकति भावाशेषमा आउने तर रमाइलो गर्न रुचाउनेमा गनिन्छन् । उनी मुडअनुसार कहिलेकाहीँ असामान्य जस्तै लाग्ने साधारण व्यवाहार पनि गर्छन् ।